२ मिनट मै कम्प्युटरका महत्वपूर्ण ट्रिक् जान्नुहोस् | ''Knowledge Never Ends''
२ मिनट मै कम्प्युटरका महत्वपूर्ण ट्रिक् जान्नुहोस्
यदि कुनै कुरा जम्मा २ मिनेटमै सिक्न सकिने र त्यो सिकेको कुरा निकै काम लाग्ने रहेछ भने अरु के नै चाहियो र ?
इन्टरनेट स्पीड बढाउने ट्रिक:
यसको लागि Start मेनुमा गएर RUN जानुहोस् अनि Gpedit.msc टाइप गर्नुहोस् । त्यसपछि ok थिच्नुहोस् । यो सँगै कम्प्युटरको स्क्रिनमा एक ट्याब खुल्नेछ । उक्त ट्याबमा रहेको Comput Configuration मा क्लिक गर्नुहोस् । अब ca Administrative Templates मा क्लिक गर्नुहोस् । अनि Network cK;g अप्सन छानेसँगै त्यहाँ देखापर्ने Qos Packet Scheduler सेलेक्ट गर्नुहोस् ।
त्यसपछि Limits reservable bandwith मा क्लिक गर्नुहोस् । अब नयाँ ट्याब खुल्नेछ र त्यहाँ ३ वटा अप्सन दिइएको हुन्छ । ३ अप्सन मध्ये Disabled लाई छान्नुहोस् । त्यसपछि सोही ट्याबमा सबैभन्दा तल रहेको Apply भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी ok मा क्लिक गर्नुहोस् ।
यसो गर्नुभयो भने तपाइँको इन्टरनेटको स्पीड बढ्नेछ ।
किन बढ्छ स्पीड ?
Limits reservable bandwith लाई Disable गरेसँगै तपाइँको कम्प्युटरले विन्डोजसँग सम्बन्धित यस्ता टास्कलाई अनुमति दिँदैन जसलाई ब्याण्डविथको आवश्यकता पर्दछ । साथै अटोम्याटिक अपडेट पनि बन्द हुन्छ । जसका कारण इन्टरनेटको स्पीड बढ्दछ ।
अदृश्य फोल्डर बनाउने ट्रिकः
चाहे तपाइँले पूरानो फोल्डरलाई छान्नुभएको होस् वा नयाँ फोल्डर बनाउनुभएको होस्, सबैभन्दा पहिले त्यसको आइकन लुकाउनु पर्दछ।
फोल्डरमा राइट क्लिक गरी Properties मा जानुहोस्
त्यहाँ रहेका सबै अप्सन मध्ये Customize मा क्लिक गर्नुहोस्
जुन विन्डोज ओपन हुन्छ उसैबाट Change Icon ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् ।
एक ब्राउजिंग विन्डो ओपन हुनेछ उक्त अप्सनमा ब्लांक स्पेसको अप्सन छान्नुपर्छ । त्यसपछि ok मा क्लिक गर्नुहोस् अनि फोल्डर आइकन हराउनेछ ।
फोल्डरको नाम हटाउने ट्रिकः
आइकन हटाएपछि पनि फोल्डरको नाम हटेको हुँदैन । त्यसलाई हटाउनका लागि समेत एक खास ट्रिक् अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि फोल्डरमा राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि Rename अप्सन छान्नुहोस् । त्यसपछि ALT सँगै 0160 थिच्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् । विन्डोज एक्सपी, विन्डोज सेभेन तथा विन्डोज ८ मा यो सिस्टमले काम गर्नेछ ।
Posted by neupanekeshav in Computer/Internet Tips, Internet Tips
← फलामखानी र पेट्रोलियम अन्वेषणको कुरा नपत्याउने कोही पत्रकार भेट्नुभयो भने क्रमश: कावासोतिभन्दा अलिकति उत्तर चढेर माथि पहाडतिर र दैलेखमा हेर्न पठाइदिनुस् । – प्र.म.ओली।
फेसबुकमा लुकाएको फ्रेण्ड लिस्ट कसरी हेर्ने ? →